चन्द्रागिरी हिल्सकाे आईपीओको बाँडफाँट, कसले कति पाए ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > चन्द्रागिरी हिल्सकाे आईपीओको बाँडफाँट, कसले कति पाए ?
काठमाडौं । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ ।
विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलको कार्यालयमा शुक्रवार बिहान भएको बाँडफाँटमा बढी पाउनेले ११ कित्तासम्म शेयर पाएका छन् । योग्य आवेदक १२ लाख ११ हजार ११५ मध्य १ लाख ३९ हजार ६०२ जनाले १० कित्ताका दरले शेयर पाएका छन् भने यी मध्यकै दुई जनाले थप एक एक कित्ताका दरले पाएका छन् ।
उक्त कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा १७ दशमलव ५७ गुणा बढी आवेदन परेको थियो । १२ लाख ५१ हजार ९३८ जना आवेदकले २ करोड ४४ लाख २९ हजार ८४० कित्ता शेयर खरीदको लागि आवेदन दिएका थिए ।
रितपूर्वक आवेदन दिएका १२ लाख ११ हजार ११५ जना आवेदकलाई मात्र बाँडफाँटमा सहभागी गराइएको थियो । यी आवेदकहरुबाट २ करोड २८ लाख २० हजार २१० कित्ता शेयरको माग भएको विक्री प्रबन्धकको भनाई छ ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानियका लागि आईपीओ बाँडफाँट गरी दोस्रो चरणमा अन्य सर्वसाधारणका लागि विक्री गरेको हो । सर्वसाधारणलाई आईपीओ बाँडफाँट गरेपश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ९१ हजार पुगेको छ ।
२०७७ माघ ९ गते ११:२० मा प्रकाशित
वीरगञ्जमा साढे ३६ करोड युनिट विद्युत विक्री, ४० करोड बक्यौता रकम उठेन
कोरोना संक्रमित भागे अब प्रहरीले गोली हान्ने
सकियो सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ
तरकारी खेतीबाटै वार्षिक साढे ३७ लाख आम्दानी !